ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူး ရှိ ရောင်းရန် Land Sale in Bago (ID-314), ခြံ ၊ မြေကွက် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - ခြံ ၊ မြေကွက် - Land Sale in Bago (ID-314)
2 Acres land for sale in Bago.
Asking price for 1 Acres is - 200 Lakh (Nego).
Land Sale in Bago (ID-314)
ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရောင်းရန် မြေ ဖြစ်သည်။
မြေအကျယ် - ၂ ဧက ရှိသည်။
မြေ ၁ ဧက အရောင်းဈေးနှုန်းမှာ - သိန်း ၂၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်သည်။
ပဲခူးရှိ မြေ အရောင်း (ID-314)
Property ID: S-1189624
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Land Sale in Bago (ID-314)
Land Sale in Bago (ID-323)
Land Sale in Bago (ID-321)
Land Sale in Bago (ID-315)
Land For Sale in Bago (ID-313)
Land For Sale in Bago (ID-312)
Land For Sale in Bago (ID-305)
Land Sale In Bago (ID-301)
ဘုရားကြီးမြို့ စက်မှုဂရန်မြေ အာရှအမြန်လမ်းမကြီး မေးတင် မျက်နှာဝ 550 ပေ
ဧက ၃၀၀ ဥယျာဉ်ခြံမြေကွက် ရောင်းမည်။
Shweproperty ID: S-1189624
ပဲခူး | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး